Doro Anya iPhone ebe nchekwa - Mfe, ngwa ngwa na n'ụzọ dị irè
Ọ bụrụ na ị kemgbe ihe iPhone ọrụ ruo oge ụfọdụ, ọ bụ ụfọdụ na ị ga-abụrịrị na-agba ọsọ nke ohere nchekwa na gị iPhone na otu isi ma ọ bụ nke ọzọ. Eziokwu nke na enweghị nchekwa bụ na ya a nnọọ manụ ọnọdụ, ọ na-aghọ ọbụna ihe na-akụda mmụọ na-agbalị onwe elu ụfọdụ n'ime ohere na gị iPhone dị ka ọ bụ, ezi hoo haa, a otutu siri ike na-eme.
1. Hichapụ ejibeghi ngwa
Ugbu a, ọ bụrụ na gị onwe gị kwa dị ka ọtụtụ n'ime iOS ọrụ niile gburugburu ụwa, ị na-agbụ na ejedebe na ibu nke ngwa ọdịnala na gị iPhone. Ị na-ahụ, ọ bụ ihe siri ike na-alụ ọgụ ọnwụnwa nke ịzụ ndị niile ọhụrụ ngwa ma ọ bụ nbudata ha maka free si App Store. Ya mere, ọ bụghị ihe a na anya na i nwere ike ejedebe na ọtụtụ arụpụtaghị ngwa, egwuregwu na ndị ọzọ na utilities na gị iPhone na i siri ike eji na a ogologo oge. Na, ihe karịrị otu oge ha na-amalite na-eri na gị iPhone ebe nchekwa.
Na-echegbu onwe bụghị dị ka ị nwere ike ihichapụ dị otú ahụ ejibeghi ngwa ọdịnala na iji n'okpuru nyere ụzọ.
Dị nnọọ pịa ma jide ọ bụla nke na-achọghị ngwa oyiyi na gị iPhone n'ụlọ ihuenyo ruo mgbe niile akara ngosi na-amalite na-akpụ akpụ / wiggling. Ị ga-n'ihi na n'aka ịhụ na gị niile ebudatara ngwa ga-akacha amalite-akpụ akpụ na sekọnd ole na ole tinyere na obere X ịrịba ama n'elu nke ọ bụla n'ime ha. Ka ihichapụ ngwa, nanị pịa na X akpan akpan ngwa si akara ngosi.
N'ebe ahụ bụ otu ihe n'ụzọ ka ihichapụ ngwa ọdịnala na gị iPhone, ị nwere ike ịga Ntọala> Ozuruọnụ> ojiji na mgbe ahụ na-ele otú ukwuu nke na ebe nchekwa a na-eji site na ngwa ọdịnala na gị iPhone. Ozugbo ị chọtara na ngwa na-na-ewere ọtụtụ nke ohere na mkpa ka e wepụ, ị nanị nwere pịa na ngwa aha wee pịa on nhọrọ nke Nhichapụ App.
2. Wepụ ochie Podcast na vidiyo
Ugbu a, anyị nile maara na ndị pọdkastị na videos-ewepụ a otutu ohere na gị iPhone. Ọfọn, ọ bụrụ na i zọpụta ndị na kọmputa gị ma ọ bụ nanị ma ọ bụrụ na unu adịghị mkpa ha ọzọ i nwere ike na-eso nzọụkwụ dị ka nyere n'okpuru ka ihichapụ ha na onwe elu ohere na gị iPhone.
Nzọụkwụ 1: Ị nwere ike wepu aha na Podcast ị na-adịkwaghị mkpa site na ịga na Pọdkastị ngwa. Mgbe ahụ, pịa nhọrọ 'Dezie' na mgbe ahụ X ịrịba ama na elu n'akụkụ aka ekpe nke akpan akpan Podcast. N'ikpeazụ, pịa na 'Emela' nhọrọ rụchaa usoro.
Nzọụkwụ 2: Hichapụ a akpan akpan Podcast nwunye na ị na-adịghị mkpa ọzọ. N'ihi na ohere gị Podcast na mgbe ahụ swipe na nwunye kwupụta aka ekpe n'akụkụ iji nweta nhọrọ nke ihichapụ.
3. Save foto Dropbox ma ọ bụ Flickr
Dropbox - Ị ga-enwe ndị Dropbox mobile ngwa ebudatara n'ihi na nke a na gị iPhone. Ị nwere ike nweta ya si ebe a. Ugbu a, ihe mbụ ị na-eme bụ gaa na ọnọdụ na gị Dropbox ebe ị ga-amasị foto echekwara. Mgbe ahụ, pịa na ndị ọzọ omume menu (...) nnọchianya nyere n'elu nri n'akụkụ aka nke ngwa. Ọzọ, site dobe ala menu, pịa na nhọrọ Bulite File.
Ugbu a, nanị họrọ foto na ị chọrọ iji chekwaa ma pịa on nhọrọ nke Bulite otu ugboro ọzọ.
Flickr - Anyị ga-ekwurịta ihe ndị kasị ụzọ bulite a dum ọtụtụ nke foto na gị igwefoto mpịakọta ka Flickr. Ndị a bụ nzọụkwụ na mkpa ka i soro iji na-enwe ike ime nke ahụ.
Jikọọ gị na PC na iPhone
Ugbu a, mmekọrịta gị niile foto na iTunes
Nke ikpeazụ nzọụkwụ, ị nanị nwere bulite foto ndị a na-Flickr-eji ihe online nchọgharị.
4. Mee ozi gị na-akpaghị aka na-ekubi ume
Nzọụkwụ 1: Gaa na Ntọala ngwa na mgbe ahụ enweta on Ozi.
Nzọụkwụ 2: Mgbe ahụ, pịa nhọrọ nke Nọgidenụ Ozi si n'okpuru ngalaba Ozi History.
Nzọụkwụ 3: Họrọ ma otu nke nhọrọ dị; Ụbọchị 30 ma ọ bụ 1 afọ.
Nzọụkwụ 4: Ugbu a, pịa on nhọrọ nke 'Hichapụ' site popup menu ka iji gosi na ị ga-achọ iOS ka ihichapụ ozi niile na tọrọ oge i kpọmkwem.
5. Otu-click ngwọta ikpochapụ iPhone ebe nchekwa - Wondershare SafeEraser
Wondershare SafeEraser bụ ihe kasị mma iOS ngwaọrụ 'ihichapu' software na i nwere ike inwe aka gị na taa. Ọ bụ nnọọ ọma e wee na-eme ọrụ nke na-adịgide adịgide ikpochapụ niile onwe gị ozi site gị iOS ngwaọrụ na iji US Military spec n'elu-ede technology.
Na n'elu nke, ị pụrụ iji SafeEraser ime ndị na-esonụ dị nnọọ mfe, ma mbụ otú hụ na ị na ibudatara na arụnyere na ya na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 1: Ẹkedori SafeEraser na jikọọ na gị iPhone gị na kọmputa na-echere ruo mgbe ngwa na-achọpụta rụọ ngwaọrụ gị. Ozugbo mere, pịa '1-Click nzacha na mkpocha' nhọrọ site na isi interface nke ngwa.
Nzọụkwụ 2: Ozugbo Doppler dị n'elu, ị ga-ahụ ngụkọta ego nke junk ị nwere na gị iPhone. Nanị pịa nhọrọ nke 'nzacha na mkpocha' na-amalite ihichapụ na junk faịlụ. The ihicha ga-eme na a nkeji ole na ole
Ihichapu ehichapụ Data
Nzọụkwụ 1: Nke a bụ ụzọ ka ihichapụ ihe na e trashed gị iPhone ma ka nwere ike na-bi ụfọdụ nke ebe nchekwa n'ime. Malite site launching SafeEraser na-ahọpụta nhọrọ nke 'ihichapu ehichapụ faịlụ' site na isi interface.
Nzọụkwụ 2: Ozugbo ngwa ka okokụre ịgụ isiokwu ngwaọrụ gị niile na-ehichapụ faịlụ ndị ka ebe na gị iPhone bi na mmezi bit nke dị oké ọnụ ahịa na ebe nchekwa, nnọọ pịa na 'ihichapu Ugbu a' button. I nwekwara ike họrọ faịlụ na ị chọrọ ehichapụ.
Nzọụkwụ 3: Ị gaghị chọrọ ịbanye 'ihichapụ' na-esonụ popup window wee pịa na ihichapu Ugbu a bọtịnụ otu ugboro ọzọ.
Ọcha onwe data
Nzọụkwụ 1: Site isi interface, họrọ nhọrọ nke ihichapu Private Data. The ngwa kwesịrị ugbu a na-akpaghị aka na-amalite ịgụ isiokwu gị iPhone maka ego nke onye data n'ebe ahụ.
Nzọụkwụ 2: Ozugbo Doppler ka okokụre, ngwa kwesịrị igosipụta na ndepụta niile onwe data; ị nwere ike nye akara ndị ị chọọ ehichapụ wee pịa bọtịnụ ihichapu Ugbu a. Ozugbo ị na-eme, ị ga-ịbanye 'ihichapụ' na-esonụ popup window na pịa bọtịnụ ihichapu Ugbu a otu ugboro ọzọ.
Ị nwere ike ibudata free ikpe nke Wondershare SafeEraser si download buttons n'okpuru.
> Resource> Clean-elu> Olee otú iji Ọma Doro Anya iPhone ebe nchekwa